Momba anay - Smart Weigh Packaging Machine Co., Ltd.
Smart Weigh dia nitondra milina fanamboarana miloko mavesatra ho an'ny firenena 65 mahery. Smart Weigh dia naorina tamin'ny 2012 niaraka tamin'ny orinasa voalohany tany Henglan, tanànan'i Zhongshan, Guangdong, China ary ny tsenan'ny lasibatra any ampitan-dranomasina. Mpanorina 3 an'ny Smart Weigh no miandraikitra ny famolavolana ny milina, ny fandaharana ary ny marketing, ny orinasa dia nitombo haingana noho ny fizarana manokana, ny Smart Weigh dia nifindra ho 4500m2 trano maoderina amin'ny taona 2017.
Smart Weigh Packaging Machinery Co, Ltd dia nanantitrantitra lava ny hanomezana vahaolana azo alain-tahaka sy alain-tsika vita amin'ny milina mandanjalanja ary vita amin'ny vidiny mora. Ny kalitaon'ny milina sy ny azo ampiharina dia nanorina fifandraisana tsara sy maharitra amin'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, mpampiditra loharano izahay! Midika izany fa manome weigher, milina famonosana, ascenseur, detékera, mpandanja maso sns .. - Tsipika famonosana milanja feno ho an'ny kitapo, siny, tavoahangy ary baoritra.
Mandray andraikitra feno isika eo ambanin'ny ACCURATE, STABLE ary INNOVATION!
Miorina amin'ny fanomezana vahaolana marina sy avo lenta aorian'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay, manome antoka fa mahafeno ny filanao mandeha ho azy. Amin'ny maha-mpanamboatra rehareha sy mpamatsy ny mpanajaly tsipika, mpitaingin-doko marobe, mitambatra mitambatra endrika paroaka feno milina fanasiam-bokatra, milina famonosana poketra, mpanangom-bary vita amin'ny vy, mpanara-maso lanja sy rafitra famenoana fiara dia nankasitraka ny safidinao izahay ary nanaiky ny hihoatra ny fanantenanao .
trano maoderina miaraka amin'ny haitao mandroso
misy efa nitafy weide multihead namboarina
Fahaiza-manaon'ny tsipika fanangonana
24 × 7 ora
Ny fitiliana fahanterana dia miantoka ny fahamarinan'ny milina
Mavesatra ny lanjan-tsaina amin'ny alàlan'ny milina multihead ho an'ny indostrian'ny sakafo manokana, toy ny kimchi, vary, voankazo, nofomamy, salady, voankazo vaovao, hena, fromazy, mofomamy, atody, ny fifangaroana, ny fifangaroana amin'ny labozia sy ny sisa. ary efa nanana traikefa tsara amin'ny famolavolana ireo milina famonosana entana amin'ny fototry ny orinasa mpanjifa.
Ny ekipa averina misy varotra 10 miaraka amin'ny injeniera mahay 10 no manohana ny serivisy any ivelany / an-trano sy ny serivisy an-tserasera.